Ndị ahịa nwere ike ịme anya anya ha dị ka ihe dị iche iche achọrọ, dị ka ịsa ahụ mmiri na-asacha mmiri, mgbatị ihu na mberede, ịsa ahụ ọkụ eletrik, igwe anaghị agba nchara anya, ịsa anya ụgbọ ala, wdg.
Igwe ihe eji eme ka anya na-ekpo ọkụ eletrik na-adabere na igwe eletriki na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke kwesịrị ekwesị maka ebe a na-enwe okpomọkụ dị n'okpuru ogo 0, nwere ike melite ogo mmiri nke anya ihe dị ka ogo 15.
Anya nkuju n'onwe ya nwere ọrụ nke nyocha ọkụ, mkpuchi na mgbochi, n'ihi ya, mmiri okpomọkụ nke sistemụ anya na-eme ka ọ dị na okpomọkụ mgbe niile. Ngwaọrụ na-ekpo ọkụ: a na-anakwere belt belt na-achọpụta ọkụ eletrik na-akwadebe ma kwadebe ya na usoro nchịkwa okpomọkụ na-achịkwa iji chịkwaa okpomọkụ ọkụ. Mkpuchi oyi akwa: gburugburu ebe obibi-enyi na enyi roba ihe. Cover: ịdọ aka ná ntị odo ABS ihe, na-eguzogide ọgwụ corrosion site na kemikal dị iche iche.
Patent nọmba: ZL 2012 2 0337303.1.
isi ahu 304 igwe anaghị agba nchara, pipe fitting interface GB thread.
kwatuo mkpanaka ahụ, a ga-akwa mmiri mmiri ịsa ahụ site na ebe a na-asa mmiri na 1 nke abụọ, usoro mmiri ịsa ahụ bụ 120-180 lita enwere ike ịhazi. Nrụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ 0.25-0.4MPa.
arụ ọrụ nrụgide 0.25-0.6Mpa. Push aka ahu, na aerosol anya asacha ga-ejection n'ime 1 abụọ. A ga-eme elu na Angle nke mmiri ahụ dịka akụkụ nke ihu mmadụ. Enwere ike idozi anya anya mmiri site na 12-18L / min.
Ngwaọrụ kpo oku:
a kwadebere ngwaọrụ ọkụ ọkụ eletrik ma ọ bụ usoro akpaka iji chịkwaa okpomọkụ ma ọ bụ bido ọkụ ọkụ. Ike ike ikpo ọkụ: 10KW, ma ọ bụ ike ike dịka ọchịchọ.
Mkpuchi oyi akwa:
gburugburu ebe obibi-enyi na enyi roba ihe. Cover: ịdọ aka ná ntị odo ABS ihe, na-eguzogide ọgwụ corrosion site na kemikal dị iche iche.
Voltaji na nke ugbu a: AC380V voltage, 25A dị ugbu a.
Exd II BT4. (enwere ike ịhazi ya dịka ihe achọrọ) ọkwa nchedo: IP65. (Enwere ike ịhazi ya dịka ihe achọrọ)
BH32-1062B: site na isi ihe mejuputara na vetikal, akagbu nke akuku uzo.
BH36-1066: E wepụrụla akụkụ ọkụ eletrik nke usoro ihe eji eme ihe, enweghịkwa mkpuchi ABS
BH32-1066 (vetikal): site na ụdị nke ihe mejupụtara na vetikal, kagbuo akụkụ ịsa ahụ. N'otu oge ahụ, a na-akagbu akụkụ eletrik nke ịchọta ihe ọkụkụ dị mkpa, ọ nweghịkwa mkpuchi ABS
Nke gara aga: Comprehensive anya na-asa ọdụ
Osote: Onyinye mmiri ịsa ahụ mejupụtara